နတ်ကောင်း နတ်မြတ်များ သင့်ကိုစောင့်လျှောက်နေကြောင်း သိနိုင်သော အချက်များ - Myitter
နတ်ကောင်း နတ်မြတ်များ သင့်ကိုစောင့်လျှောက်နေကြောင်း သိနိုင်သော အချက်များ
October 3, 2019 Myitter ဗဟုသုတအစုံ 0
တချို့လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ မွေးရာပါကံလို့ပဲပြောရမလား၊ ထူးခြားချက်လို့ပဲပြောရမလား (အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်) နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ စောင့််ရှောက်ခြင်းကို အမြဲတမ်းခံရပါတယ်။ သင့်ကိုနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ့်အချက် (၅) ချက်ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီအရာလေးတွေကို သင်အမြဲလိုလို ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ မမြင်ရတဲ့ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ စောင့်ရှောက်ခြင်းကို ခံရသူပါနော်.
တကယ်လိုိ့သင့်အနားလေးမှာ ငှက်မွှေးလေးဝဲနေတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်အပေါ်လေးကိုကျလာတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဘေးမှာ သူတို့အမြဲရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပြောပြချင်လို့ဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာသင့်ကို ချစ်ခင်တယ်၊ မစတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သမရိုးကျနေရာတွေမဟုတ်တဲ့ ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းလိုနေရာမျိုးလေးတွေမှာ တွေ့ရင်တော့ ပိုလို့တောင်သေချာပါတယ်။
၁၁း၁၁ နာရီကို မကြာခဏတွေ့ဖူးလား။ ဒါဟာ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ ဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂဏန်းလေးကိုတွေ့ပြီဆိုရင် သင်ကံကောင်းတော့မယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။ ၁၁း၁၁ နာရီရဲ့အကြောင်းလေးကိုတော့ ဒီနေရာလေးမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ…။
ကောင်းကင်ကို အမှတ်တမဲ့မော့ကြည့်လိုက်လို့ တိမ်ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေက ထူးခြားနေတယ်ဆိုရင် သင့်ကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ညွှန်ပေးနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အသည်းပုံတိမ်လေးကိုမြင်ရင် အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကံကောင်းမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုလုပ်သင့်တယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။
နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေဟာ မွှေးရနံ့တွေနဲ့လည်း အချက်ပြတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ပန်းရနံ့သင်းသင်းလေး ဒါမှမဟုတ် ချောကလက်နံ့လို စားချင်စရာလေး၊ ချိုမြိန်တဲ့ရနံ့လေးတွေနဲ့ သူတို့သင့်ကို စောင့်ရှောက်နေကြောင်း အသိပေးတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ရေမွှေးနံ့လိုမျိုး၊ သင်းပျံ့တဲ့ရနံ့တွေက သင့်ကိုသူတို့ ချစ်ခင်တယ်၊ စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာတစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေရင်တောင် သင့်ဘေးနားမှာ အဖော်တစ်ယောက်လောက် အမြဲရှိနေသလို ခံစားရမှာပါ။ လုံခြုံပြီး အလိုလိုပျော်နေတဲ့ ခံစားချက်ကို ခံစားရမှာပါ။ စိတ်ကြည်လင်ပြီး စိတ်ခွန်အားတွေကို တွေ့မြင်သမျှ အရာတွေကနေတစ်ဆင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက သင့်ကို အားပေးချစ်ခင်နေတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။
တခြို့လူတှဟော သူတို့ရဲ့ မှေးရာပါကံလို့ပဲပွောရမလား၊ ထူးခွားခကျြလို့ပဲပွောရမလား (အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့) နတျကောငျးနတျမွတျတှရေဲ့ စောငျ့ရှောကျခွငျးကို အမွဲတမျးခံရပါတယျ။ သငျ့ကိုနတျကောငျးနတျမွတျတှကေ စောငျ့ရှောကျတယျဆိုတာ သိနိုငျမယျ့အခကျြ (၅) ခကျြရှိပါတယျ။ တကယျလို့ ဒီအရာလေးတှကေို သငျအမွဲလိုလို ကွုံတှနေ့ရေတယျဆိုရငျတော့ သငျဟာ မမွငျရတဲ့ နတျကောငျးနတျမွတျတှရေဲ့ စောငျ့ရှောကျခွငျးကို ခံရသူပါနျော.
တကယျလို့သငျ့အနားလေးမှာ ငှကျမှေးလေးဝဲနတေယျ၊ ဒါမှမဟုတျ သငျ့အပျေါလေးကိုကလြာတယျဆိုရငျတော့ ဒါဟာ နတျကောငျးနတျမွတျတှရေဲ့ သင်ျကတေဖွဈပါတယျ။ သငျ့ဘေးမှာ သူတို့အမွဲရှိနတေယျဆိုတာကို ပွောပွခငျြလို့ဖွဈပွီး သူတို့ဟာသငျ့ကို ခဈြခငျတယျ၊ မစတယျဆိုတာကို ဖျောပွလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ သမရိုးကနြရောတှမေဟုတျတဲ့ ဧညျ့ခနျး၊ အိပျခနျးလိုနရောမြိုးလေးတှမှော တှရေ့ငျတော့ ပိုလို့တောငျသခြောပါတယျ။
၁၁း၁၁ နာရီကို မကွာခဏတှဖေူ့းလား။ ဒါဟာ နတျကောငျးနတျမွတျတှရေဲ့ ဂဏနျးဖွဈပါတယျ။ ဒီဂဏနျးလေးကိုတှပွေီ့ဆိုရငျ သငျကံကောငျးတော့မယျဆိုတာ အသအေခြာပါပဲ။ ၁၁း၁၁ နာရီရဲ့အကွောငျးလေးကိုတော့ ဒီနရောလေးမှာ ဖတျကွညျ့လိုကျပါ…။
ကောငျးကငျကို အမှတျတမဲ့မော့ကွညျ့လိုကျလို့ တိမျရဲ့ ပုံသဏ်ဍာနျလေးတှကေ ထူးခွားနတေယျဆိုရငျ သငျ့ကို လုပျဆောငျဖို့ ညှနျပေးနတောဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ အသညျးပုံတိမျလေးကိုမွငျရငျ အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျပွီး ကံကောငျးမယျ၊ ဒါမှမဟုတျ တဈခုခုလုပျသငျ့တယျ ဆိုတာမြိုးပေါ့။
နတျကောငျးနတျမွတျတှဟော မှေးရနံ့တှနေဲ့လညျး အခကျြပွတတျပါတယျ။ ဥပမာ ပနျးရနံ့သငျးသငျးလေး ဒါမှမဟုတျ ခြောကလကျနံ့လို စားခငျြစရာလေး၊ ခြိုမွိနျတဲ့ရနံ့လေးတှနေဲ့ သူတို့သငျ့ကို စောငျ့ရှောကျနကွေောငျး အသိပေးတတျပါတယျ။ နောကျပွီး ရမှေေးနံ့လိုမြိုး၊ သငျးပြံ့တဲ့ရနံ့တှကေ သငျ့ကိုသူတို့ ခဈြခငျတယျ၊ စောငျ့ရှောကျတယျဆိုတာကို ဖျောပွနတောဖွဈပါတယျ။
သငျဟာတဈယောကျတညျးဖွဈနရေငျတောငျ သငျ့ဘေးနားမှာ အဖျောတဈယောကျလောကျ အမွဲရှိနသေလို ခံစားရမှာပါ။ လုံခွုံပွီး အလိုလိုပြျောနတေဲ့ ခံစားခကျြကို ခံစားရမှာပါ။ စိတျကွညျလငျပွီး စိတျခှနျအားတှကေို တှမွေ့ငျသမြှ အရာတှကေနတေဈဆငျ့ ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ နတျကောငျးနတျမွတျတှကေ သငျ့ကို အားပေးခဈြခငျနတေယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျပါ။
နှလုံး ရုတ်တရက် ရပ်မသွားအောင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် တစ်ရက်ကိုမိနစ်ဝက် ၃ ကြိမ်နဲ့ နာရီဝက် ၃ ကြိမ်